Aịzaya 49 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
49 Geenụ m ntị, unu agwaetiti,+ ṅaanụ ntị, unu mba ndị dị n’ebe dị anya.+ Jehova kpọrọ m+ ọbụna mgbe m nọ n’afọ.+ Ọ kpọrọ m aha mgbe m nọ n’afọ nne m.+ 2 O wee mee ka ọnụ m dị ka mma agha dị nkọ.+ O zobewo m+ na ndò+ aka ya. O wee mee ka m bụrụ akụ́ a pịrị apị. O zobere m n’ime akpa akụ́ ya. 3 O wee sị m: “Izrel,+ ị bụ ohu m, gị onye m ga-egosi ịma mma m n’ahụ́ ya.”+ 4 Ma mụ onwe m sịrị: “Ọ bụ n’efu ka m dọgburu onwe m n’ọrụ.+ Emefusịwo m ike m+ n’ihe na-enweghị ihe ọ bụ nakwa n’ihe efu. N’ezie, ikpe m dị n’aka Jehova,+ ụgwọ ọrụ m dịkwa n’aka Chineke m.”+ 5 Ma ugbu a, Jehova, bụ́ Onye kpụrụ m mgbe m nọ n’afọ ka m bụrụ ohu ya,+ ekwuwo ka m kpọghachitere ya Jekọb,+ ka e wee kpọkọta Izrel n’ebe ọ nọ.+ A ga-enye m otuto n’anya Jehova. Chineke m ga-abụworị ike m. 6 O wee sị: “Ọ bụghịrị gị obere ihe na ị ga-abụ ohu m iji mee ka ebo niile nke Jekọb bilie nakwa iji kpọghachite ndị Izrel e chebere echebe.+ Enyewokwa m gị ka ị bụrụ ìhè nke mba niile,+ ka nzọpụta m wee ruo nsọtụ ụwa.”+ 7 Nke a bụ ihe Jehova, Onye Mgbapụta Izrel,+ bụ́ Onye Nsọ ya, gwara onye e ledara anya ruo ná mkpụrụ obi,+ onye mba ahụ kpọrọ asị,+ onye na-ejere ndị na-achị achị ozi:+ “Ndị eze ga-ahụ ya wee bilie ọtọ,+ ndị isi ga-ahụkwa ya wee kpọọ isiala, n’ihi Jehova, onye kwesịrị ntụkwasị obi,+ Onye Nsọ Izrel, bụ́ onye họọrọ gị.”+ 8 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọ bụ n’oge igosi ihu ọma ka m zara gị,+ ọ bụkwa n’ụbọchị nzọpụta ka m nyeere gị aka.+ M nọ na-echebe gị ka m wee wepụta gị ka ị bụrụ ọgbụgba ndụ dịịrị ndị mmadụ,+ iji mee ka ala a dịghachi otú ọ dịbu,+ iji mee ka e birighachi n’ala nke bụ́ ihe nketa tọgbọrọ n’efu,+ 9 iji sị ndị mkpọrọ,+ ‘Pụtanụ!’+ sịkwa ndị nọ n’ọchịchịrị,+ ‘Meenụ ka a hụ unu!’+ N’akụkụ ụzọ ka ha ga na-ata nri, ọ bụkwa n’ụzọ niile e ji ụkwụ waa ka ha ga na-ata nri.+ 10 Agụụ agaghị agụ ha,+ akpịrị agaghịkwa akpọ ha nkụ,+ oké okpomọkụ agaghị eme ha, anwụ agaghịkwa acha ha.+ N’ihi na Onye na-emere ha ọmịiko ga na-edu ha,+ ọ ga na-edu ha n’akụkụ isi mmiri dị iche iche.+ 11 M ga-eme ka ugwu m niile bụrụ ụzọ, okporo ụzọ m niile ga-adịkwa n’ebe dị elu.+ 12 Lee! Ndị nke a ga-esi ọbụna n’ebe dị anya bịa,+ lee! ndị nke a esi n’ebe ugwu+ nakwa n’ebe ọdịda anyanwụ bịa,+ ndị ọzọ esi n’ala Saịnim bịa.” 13 Tie mkpu ọṅụ, gị eluigwe,+ ṅụrịa ọṅụ, gị ụwa.+ Ka ugwu niile tie mkpu ọṅụ.+ N’ihi na Jehova akasiwo ndị ya obi,+ ọ na-emere ndị ya ọ na-enweghị ka ọ hà ha ọmịiko.+ 14 Ma Zayọn nọ na-asị: “Jehova ahapụwo m,+ Jehova echefuwokwa m.”+ 15 Nwaanyị ọ̀ pụrụ ichefu nwa ya ka na-aṅụ ara, nke na ọ gaghị emere nwa ọ mụrụ ebere?+ Ọbụna ndị inyom a nwere ike ichefu,+ ma mụ onwe m agaghị echefu gị.+ 16 Lee! Akanyewo m gị n’ọbụ aka m dị ka akara.+ Mgbidi gị niile dịkwa n’ihu m mgbe niile.+ 17 Ụmụ gị emewo ngwa ngwa. Ndị na-etida gị na ndị na-ebibi gị ga-esi n’ebe ị nọ pụọ. 18 Legharịa anya hụrụ. A kpọkọtawo ha niile.+ Ha abịakwutewo gị. “Dị nnọọ ka m dị ndụ,” ka Jehova kwuru,+ “ị ga-eyiri ha niile dị ka ihe ịchọ mma, ị ga-eyiri ha otú nwaanyị a na-alụ ọhụrụ si eyiri ihe ịchọ mma.+ 19 Ọ bụ ezie na i nwere ebe e bibiri ebibi na ebe e mere ka ọ tọgbọrọ n’efu nakwa ala gị nke bụ́ mkpọmkpọ ebe,+ ọ bụ ezie na ebe i bi ugbu a abaghị gị, ndị na-eloda gị anọrọwokwa gị n’ebe dị anya,+ 20 ụmụ a mụrụ mgbe ị gba aka ụmụ+ ga-ekwu ná ntị gị, sị, ‘Ebe a abakwaghị m ma ọlị.+ Nyekwuo m ebe ọzọ ka m biri.’+ 21 Ị ga-asịkwa n’obi gị, ‘Ònye bụ nna mụụrụ m ụmụ a, ebe m bụ nwaanyị gba aka ụmụ, nke na-adịghị atụ ime, onye a dọọrọ n’agha na onye a kpụụrụ ka ọ bụrụ onye mkpọrọ?+ Ma ụmụ ndị a, ọ̀ bụ onye zụlitere ha?+ Lee! A hapụrụ naanị m.+ Ụmụ ndị a—olee ebe ha nọ kemgbe?’”+ 22 Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Lee! M ga-eweliri mba dị iche iche aka m,+ m ga-ewelikwara ndị dị iche iche ihe mgbaàmà m.+ Ha ga-ekuru ụmụ gị ndị ikom n’obi bịa, ha ga-ebukwa ụmụ gị ndị inyom n’ubu ha.+ 23 Ndị eze ga-abụrụ gị ndị nlekọta,+ ada ndị eze ha ga-abụkwa ndị na-enyere gị ụmụ gị ara. Ha ga-akpọrọ gị isiala,+ ha ga-arachakwa ájá dị n’ụkwụ gị;+ ị ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, onye na-agaghị ekwe ka ihere mee ndị nwere olileanya n’ebe ọ nọ.”+ 24 À pụrụ ịnapụ dike ndị ọ kpụụrụ,+ ka ndị onye na-achị n’aka ike dọọrọ n’agha hà pụrụ ịgbalaga?+ 25 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “A ga-anapụ dike ọbụna ndị ọ dọọrọ n’agha,+ ndị onye na-achị n’aka ike kpụụrụ ga-agbalagakwa.+ Onye ọ bụla nke na-alụso gị ọgụ ka m ga-alụso ọgụ,+ m ga-azọpụtakwa ụmụ gị.+ 26 M ga-eme ka ndị na-emegbu gị rie anụ onwe ha; ọbara ha ga na-egbu ha dị ka mmanya dị ụtọ. Anụ ahụ́ niile ga-amarakwa na mụ onwe m, Jehova,+ bụ Onye Nzọpụta gị+ na Onye Mgbapụta gị,+ Dike nke Jekọb.”+